Kani waa maqaal ku saabsan Looska.
Midhaha looska oo kala furan
Loos, Lows (Af Ingiriis : peanut; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) magaca Saynis Arachis hypogaea, waa midho qolofley ah, adag, dahaar iyo qolof leh, kaasi oo ka tirsan dhirta loo yaqaano "Fabaceae". Sida la ogyahay waxaa geedka looska la dhaqan jirey oo laga beeri jiry dooxada Baraguay. Loosku waa midho iyo geed sanadle ah, taasi micnaheedu waa in loosku dhalo hal mar sanadkii. Dhererka geedka loosku wuxuu gaadhaa dherer dhan ilaa 50 sentimitir (1.0 ilaa 1.6 ft). Caleemaha geedkani waa kuwo u baxa si kalajeed ah, waxayna leeyihin dhumuc dhan 7 sentimitir (⅜ ilaa 2¾ in) iyo baladh dhan 3 sentimitir (⅜ ilaa 1 inji).
Dhinaca kale, caleemaha geedka loosku waa kuwo balaadhan, 2 ilaa 4 sentimitir (0.8 ill 1.6 inji) (¾ ilaa 1½ inji), midabkoodu waa huruud casaan xiga. Waxaa jira noocyo badan oo loos ah, kuwaasi oo ku kala duwan muuqaalka, dhadhanka, dhumucda iyo midabka. Guud ahaan midhaha geedka loosku waxay ka baxaan xididada geedka, waxaana ku daboolan qolof la kala jebin kara laakiin difaac uga ah xasharaadka iyo dulinka. Midhaha geedka looska waxaa loo isticmaalaa cunto fudud ahaan, waxayna leeyihiin borotiin iyo nafaqo badan kaasi oo jidhka dadka iyo xayawaanku u baahan yahay.
↑ "Nuqul Archive". Waxaa laga kaydiyay the original Bisha Laba iyo Tobnaad 26, 2018. Soo qaatay February 13, 2015. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin); Hubi qiimaynta taariikhda: |archive-date= (caawin)
↑ "Nuqul Archive". University of Georgia. January 2, 2004. Waxaa laga kaydiyay the original Bisha Shanaad 15, 2008. Soo qaatay August 18, 2009. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin); Hubi qiimaynta taariikhda: |archive-date= (caawin)
↑ http://www.peanut-institute.org/peanut-facts. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Loos&oldid=233000"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Maarso 2022, marka ee eheed 05:56.